Realme 3 Pro: Nkọwapụta, ọnụahịa na mwepụta gọọmentị | Gam akporosis
Realme 3 Pro: middị ọhụụ ọhụụ ahụ
Edere Ferreno | | China gam akporo, Mobiles
Anyị na-anụ akụkọ banyere Realme 3 Pro maka izu. Ọ bụ akara amị ọhụrụ amụrụ ọhụrụ nke akara ndị China, akara nke abụọ nke OPPO. Izu ole na ole gara aga ka akwadoro na nkwupụta ya ewere ọnọdụ na Eprel 22, ka o si dị. Na mgbakwunye, n'ime izu ndị a anyị enweela ike ịmata ụfọdụ nkọwa nke ekwentị a, n'ihi ọtụtụ nkwụsị, dị ka processor ị na-eji.
N'ikpeazụ, nke a emere Realme 3 Pro. Ya mere, anyị maara ihe niile banyere ama ọhụrụ a sitere na akara ndị China. Ekwentị nke ebuputara n'ime oke dị n'etiti ụlọ ọrụ ahụ, nke ahụ na-ekwe nkwa ịhapụ gị ezigbo mmetụta.
Na nhazi imewe, akara ndị China na-agbaso ejiji nke ahịa. Ya mere, anyị na-ahụ ihuenyo nwere ọkwa n'ụdị otu ntapụ mmiri. Na mgbakwunye inwe ọtụtụ igwefoto na ekwentị, dị ka ọ dị na mbụ n'etiti igwe na gam akporo. Anyị na-agwa gị gbasara ekwentị a n'okpuru.
Ihe ngosi igwefoto Realme 3 Pro nke abalị na-ekpughe ikike ya dị egwu
1 Nkọwapụta Realme 3 Pro
2 Ọnụahịa na mwepụta
Nkọwapụta Realme 3 Pro
A maghị ika ahụ nke ọma na ahịa ndị Europe. Mana Realme 3 Pro a na-achọ inweta aha ọjọọ, n'ihi na egosiri ya dị ka ezigbo nhọrọ n'ime etiti kachasị elu na gam akporo. Ezi nkọwa, a ugbu a imewe, na mgbakwunye na ịkụ nzọ na agba na a grajentị mmetụta, otú fashionable na ahịa. Ngwakọta niile ga-aga nke ọma. Ndị a bụ nkọwa ya:
Ihuenyo: 6,3-inch IPS LCD na mkpebi HD zuru oke + na nhazi 19,5: 9
NhaziAha nhazi: Snapdragon 710
Nchekwa ime: 64/128 GB (gbasaa na micro SD)
Rear igwefoto: Sony IMX519 nke 16 MP nwere oghere f / 1.7 + 5 MP nwere oghere f / 2.4
Igwefoto n'ihu: 25 MP nwere oghere f / 2.0
Batrị: 4.050 mAh na VOOC Flash Charge 3.0
Usoro njikwa: A gam akporo na Agba OS 6.0 dị ka akwa nhazi
Njikọ: Dual SIM, Bluetooth 5.0, GPS, LTE / 4G, WiFi 802.11
ndị ọzọ: Mkpịsị aka na-agụ, AI
Akụkụ: 156,8 x 74,2 x 8,3 mm
Ibu ibu: 172 grams
Na mkpokọta, anyị nwere ike ịhụ ọtụtụ ihe anyị hụrụ na ekwentị ndị ọzọ na mpaghara a na gam akporo na ya. The Chinese ika-anọgide na eji ihuenyo karịa 6 sentimita asatọ na nke a. Ihuenyo nke na-ewe nnukwu uru n'ihu ekwentị, yana nha nke 90,8% dịka ha gosipụtara. Na ọkwa a, anyị na-ahụ igwefoto n'ihu, nke bụ 25 MP na nke a.
Na azụ nke Realme 3 Pro a anyị nwere igwefoto abụọ, na ihe mmetụta Sony. Na mgbakwunye, anyị na-ahụkwa ihe mkpịsị aka mkpịsị aka n'ime ya. Batrị bụ akụkụ ọzọ dị mkpa nke ekwentị, nwere ikike nke 4.050 mAh. Na nchikota ya na nhazi ya gha inye ezigbo ndi mmadu. Ọ na-ewebata teknụzụ na-ebu ọnụ ngwa ngwa OPPO, VOOC na ya. Ya mere na anyị nwere ike ịgba ụgwọ batrị ahụ kwuru na nkeji nkeji n'ụzọ dị mfe.
Snapdragon 710: Nhazi ohuru maka etiti
Dị ka ọ dị na mbụ na ụdị ndị ọzọ nke akara ndị China, mmalite ya na-amalite na ụfọdụ ahịa na Eshia. Maka ugbu a, amalitelarị na India, ebe enwere ike ịzụta Realme 3 Pro ugbua. N'oge a ọ nweghị ihe ekwuru banyere mmalite ya na ahịa ndị ọzọ. N’oge na-adịghị anya, a ga-ebupụta ya n’ahịa ndị ọzọ dị n’Eshia. Mana anyị amaghị ma ọ ga-ebikwa na Europe, ọ bụ ezie na ihe gbasara nke puru omume na ọ na-eme dị obere.
Anyị na-ahụ agba atọ nke Realme 3 Pro a, nke ị nwere ike ịhụ na foto ahụ. Ndị a bụ Lightning Purple (purple), Nitro Blue (acha anụnụ anụnụ) na Carbon Gray (isi awọ). Yabụ ị nwere ike ịhọrọ n'etiti nhọrọ ndị a mgbe ịzụrụ otu. Na mgbakwunye, enwere ụdị abụọ maka RAM na nchekwa, ndị ọnụahịa ha bụ ndị ọchịchị:
Ejiri ulo oru ya na 4/64 GB jiri ugwo nke 13.999 rupees (ihe dika euro 179 iji gbanwee)
Versiondị nke nwere 6/128 GB na-abịa na ọnụahịa nke 16.999 rupees Indian (ihe dị ka euro 218 na mgbanwe)
Anyị ga-ege ntị na akụkọ ga-ekwe omume banyere mbido mba ụwa nke ụdị akara ndị China. Kedu ihe ị chere banyere ekwentị ọhụrụ a site na ika ahụ?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Realme 3 Pro: middị ọhụụ ọhụụ ahụ
Ọ bụ nke ikpeazụ: Samsung na-eyigharị ire nke Galaxy Fold ruo mgbe ebighị ebi
OnePlus CEO kpughere na OnePlus 7 Pro ga-enwe nnukwu ngosi